पहिलो तस्वीर हेर्दा गज्जब लाग्यो । तस्वीर लिने काइदा निकै सन्तुलित छ । कसैले भनेको सुनेथें– तस्वीर लिने बेलाको क्लिकमा सास पनि फेर्नु हुन्न रे । हो जस्तै लाग्यो मलाई त । धन्यवाद ।
फोटो सँगै लेख्नु भएको छोटा छोटा caption हरु नै काफी लागे -एउटा लामो लेखको सारंश जस्तो !
धेरै लामो अन्तराल पछी देखा पर्नु भएको छ -खुसि लाग्यो !
दिउसो देखी बेलुका अबेर सम्म डुल्नु भएछ। सानी भुन्टी पनि आमाको पछि पछि लागेर निकै थाकेकी होलिन। अलिक पहिले तपाईहरु भारतमा हुदा समेत छोरीको प्रोजेक्ट बर्कले एउटा बल्ग आएको थियो। खुसी लाग्यो अब नेपाल तिर पनि प्रोजेक्ट बेसमा पढाई हुन थालेछ। जे होस यही निहूँमा काठमान्डु डुलाउनु भो.. खुसी लाग्यो।
साच्चै एउटा कुरा त्यो रानीपोखरीको पानि निलो हुनु पर्ने पुरै हरियो पो देख्छु म त..
हो है ! पानी त हरीयो नै रहेछ । सधैं यस्तै हो कि मैले तस्विर खिच्दा मात्रै यस्तो भा हो भने यादै भएन । अर्को पटक त्यताबट हिँडदा याद गरौंला ।
छोरीको प्रोजेक्ट वर्कको लागि भनेर खिचिएका फोटोहरु भनिए पनि एउटा ब्यबसायिक फोटो पत्रकारले खिचेका फोटो भन्दा कम लागेन है मलाई त। हामी मुलुक बाहिर बस्नेहरुलाई त संग्रहणीय लाग्यो । धन्यवाद यहाँलाई।